Australia's ODI Series Against Zimbabwe Postponed Due To The COVID-19 Crisis
Australia’s ODI series against Zimbabwe scheduled for August has been postponed due to the coronavirus pandemic. Zimbabwe were due to play three ODIs in Australia later this year, but it has been postponed. In a statement, Cricket Australia (CA) said it and Zimbabwe Cricket (ZC) had mutually agreed to the decision due to the short length of the series, significant biosecurity measures which would need to be in place and safety concerns.
The BCCI recently cancelled India’s tour of Sri Lanka and Zimbabwe due to the Covid-19 pandemic. The India National Cricket Team was originally scheduled to travel to Sri Lanka from 24th June 2020 for 3 ODIs and as many T20Is and to Zimbabwe for a series comprising 3 ODIs starting 22nd August 2020.
Looking To Reschedule The Series Super Soon: Zimbabwe Cricket
There have been more than 10.4 million confirmed cases of coronavirus worldwide, with the death toll exceeding 507,000. West Indies’ tour of England will mark the return of international cricket after the onslaught of the coronavirus from July 8.
Zimbabwe Tour Of Australia 2020